Shaja kabusha i-SFR: ungayenza kanjani ibe lula futhi mahhala
Shaja kabusha i-SFR
I-SFR iwuhlobo lwe-SIM khadi ekhokhelwa ngaphambili yaseFrance. Uma usuka lapho noma uhlele ukuya lapho, ungajabulela ucingo lweselula ngaphandle kwezivumelwano futhi ukhokhele lokho okudlayo kuphela. Leli khadi Dlula i-SFR La Carte Isebenza ngendlela elula kakhulu, kufanele nje uqashe okubhalisele, uthenge i-SIM esikhokhelwa futhi ube nekhredithi yokuthumela i-SMS, ukushayela ucingo noma ukuhlola i-inthanethi. Futhi uma isiphelile, faka kabusha i-SFR bese uqala kabusha.
Intengo engashintshi ye ucingo oluphathwayo, ngaphandle kwesibopho, ngaphandle kokuhlala noma ukukhokhiswa okumangazayo. Nakuba, uma uhamba njalo ukuya e-France, ungathenga iphasi ukuze ungaphinde ushaje njalo.
Mayelana ne-SIM khadi ye-SFR
Ungasebenzisa i-SIM khadi ye-SFR Thenga Kokubili kufayela le- iwebhusayithi kusuka ku-SFR noma kunoma yiziphi izitolo zayo ezibonakalayo, ngisho nakwezinye izitolo ezinkulu, abagwayi noma izitolo zezingcingo, phakathi kokunye. Njengoba uzobona, unenketho yokuyithola nge-€ 10, okuyintengo yayo yokuthengisa, futhi ihlanganisa u-€ 10 wesikweletu samahhala, okungukuthi, lokho okukhokhayo yilokho abakunikeza khona ekuqaleni.
Ngakolunye uhlangothi, i-SFR ine izinhlobo ezahlukene zemikhawulo ngedatha, amakholi nama-SMS. Ukusuka kokunye okuvumela i-SMS engenamkhawulo namagigabhayithi ambalwa oxhumo lwedatha yeselula, kuya kwabanye abane-inthanethi kuphela ukuze bayisebenzise kumodemu ye-LTE ye-PC yakho.
Kubalulekile ukwazi ukuthi uma ungasebenzisi i-SIM khadi ye-SFR, inosuku lokuphelelwa yisikhathi. Izophelelwa yisikhathi ngemva kwezinyanga ezingu-6 zokushajwa kwakho kokugcina. Nokho, kukhona inketho yokuqhubeka nokuthola izingcingo nemiyalezo yombhalo enombolweni yakho ngokugcwalisa okungu-€ 5 futhi ikhadi lizosebenza ezinye izinyanga ezingu-6 ezengeziwe.
Kukhona nekhadi I-Passive SIM ozokwamukela ngayo izingcingo nama-SMS ngaphandle kokushajwa kabusha. Lokhu kubiza u-€ 2 ngenyanga ngokubhalisele, nakuba kukhona nezinye izinketho ezinikeza amathuba amaningi ngemali engaphezulu kancane kwenkokhelo yanyanga zonke.
Hlola ibhalansi ye-SFR
Ungakwazi hlola ibhalansi yakho ngaphambi kokushaja kabusha i-SFR nganoma yisiphi isikhathi futhi kalula. Kufanele nje ushayele u-950 bese ulandela imiyalelo yewizadi. Uzothola imininingwane yakho yebhalansi, noma khumbula ukuthi kungathatha imizuzu eyi-15.
Isinyathelo ngesinyathelo ukushajwa kabusha kwe-SFR
Ukuze ushaje kabusha i-SFR ungasebenzisa izinketho ezimbili kwehlukile:
Gcwalisa kabusha i-SFR esitolo: ukhokha ivawusha bazokunikeza ikhodi. Ungathumela i-SMS nekhodi oyitholile ukuze uvule ukushajwa kabusha. Kuzodingeka ukuthi uthumele ikhodi ku-952, noma ushayele yona leyo nombolo bese ulandela imiyalelo enikezwe umshini wokuphendula.
Shintshanisa amasheya SFR ku-intanethi: lokhu kwenziwa kusukela ku iwebhusayithi nge-SFR. Kulokhu uzodinga ukufinyelela isevisi.
Ukuze ukhokhiswe kabusha, ungakhokhisa kusukela ku-€ 5, nakuba uma wenza inkokhelo engaphezu kuka-€ 25 uzoqala ukuyithola. amakhredithi ebhonasi. Futhi uma unanoma yiluphi uhlobo lwenkinga phakathi nenqubo noma ingashajeli, ungabheka u-1099 ngokushaya inombolo yakho yeselula ehlotshaniswa ne-SFR. Lapho uzothola usizo.
Njengezinye izinhlobo zamakhadi akhokhelwa ngaphambili, ukushajwa kabusha kwe-SFR nakho kungenziwa kuwebhu recharge.com noma kusuka ku- uhlelo lokusebenza lwamadivayisi eselula. Indlela yokuthi zonke izinsiza zakho zokushaja zibe phakathi nendawo endaweni eyodwa. Kule nkundla ungakhokha emazweni angu-140 ahlukene, ngezindlela zokukhokha ezihlukene, njengekhadi lesikweletu kanye ne-PayPal, futhi uzokwenza ngokuphepha, ukhetha phakathi kwamavawusha angu-€ 5, 10, 25 noma angu-35.
Phezulu kuselula » Izinkampani » Shaja kabusha i-SFR